Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆	14
kai says: FB မှ…
kai says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခရီးစဉ်နှင့် အချိန်ကုိုက် CSIS မြန်မာ့ အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ၀ါရှင်တန်တွင် ပြုလုပ်မည်
kai says: နေပြည်တော်(စက်တင်ဘာ ၉ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်)။ ။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုဖြစ်ပွားစေရန် အမုန်းစကားတစ်ရပ်ရပ်အား ပြောဆိုခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ပြောဆိုခြင်း၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းနှင့် လူထုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းမှတဆင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအား ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်ထိ ကျခံစေရမည်ဟူ၍ ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေကြမ်းတစ်ခု လွှတ်တော်သို့ မကြာခင် တင်သွင်းရန် ရှိနေသည်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အင်း ရိုဟင်၈ျာကိုတော့ ရိုဟင်ဂျာ မခေါ်နိုင်ဘူးပေါ့။
kai says: အမေရိကားမှာ.. အမဲတွေကို.. နီးဂရိုးလို့..( ရှေးကလို) ခေါ်ခွင့်မရှိ..။
kai says: Professional gamer is Singapore’s first Pokemon master
မမချွိ says: အာ့တော့ အဲဒီ နက္ခတ်တွေက ခု လူတွေအပေါ်ရော ဘာသက်ရောက်တုန်းး
kai says: U.S. senators set bill to keep focus on rights in Myanmar: document
kai says: President Barack Obama and Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Minister of Foreign Affairs of Myanmar, visit with Obama family pets Bo and Sunny in the Cabinet Room of the White House following their bilateral meeting, Sept. 14, 2016. (Official White House Photo by Pete Souza)
kai says: Press Releases: U.S.-Burma Relations
kai says: U.S., India sign military logistics agreement
kai says: တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး
kai says: Surprise as US ends Myanmar economic sanctions
By Jonah Fisher BBC News, Myanmar Ms Suu Kyi was not in full agreement with the decision, but had been left with little choice. But, according to my source, US officials told her it was all or nothing, and the historic decision was made to lift all sanctions.
kai says: The End of China Inc?
There’samagic formula to becomingamillionaire in China – borrow big to earn big. For years, individuals, state-owned companies and municipalities have taken massive loans to chase the Chinese dream.